Soshiki Karate 組織 空手 (松濤館) ကရာတေး: 禅と空手 ကရာတေး နှင့် ဇင် ဗုဒ္ဓဘာသာ システム( 組織) 空手, ヘッドマスター by- Myoma Myint Kywe
ကရာတေး နှင့် ဇင် ဗုဒ္ဓဘာသာ
တစ်ခုတည်းသော သန့်စင်မွန်မြတ်သော ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ မူလရင်းမြစ် ပိဋကတ် သည် ထေရဝါဒ တွင်သာ ပါရှိသည်။ ထေရဝါဒ တွင်လူသားအကျိုးပြု ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ တရားတော် (Teachings of Buddha) များ ပါဝင်သည်။ သို့ရာတွင် မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဇင် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည်လည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့သူ လူသားအကျိုးပြု ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ တရားတော် (Teachings of Buddha) များ ပါဝင်သည်။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရားနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၏ မေတ္တာ-ဂရုဏာ (Loving-kindness) တရားတော် နှင့် သည်းခံခြင်း Tolerance သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလွန်ကျော်ကြားလှသည်။
ဆရာတော် ဗောဓိဓမ္မ သည် ကိုယ်ခံပညာသမိုင်းတွင် ဩဇာအကြီးမားဆုံးသော သူများထဲတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ၏ တရားရှုမှတ်ခြင်း Zazen 坐禅, 冥想, 沉思, 禅 သည် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။
လူသားတိုင်း သည်းခံခြင်းတရား ပြည့်စုံနိုင်စေရန် လူသားတိုင်း မေတ္တာတရားတို့ကို ဖြည့်ဆည်းထားရန်လိုအပ် ပါသည်၊ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၏ ပါရမီဆယ်ပါး တွင် မေတ္တာပါရမီ + ခန္တီ ပါရမီ (မေတ္တာ+သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း) ပါဝင်သည်၊
ကရာတေးတွင် အသုံးချမှုသိပ္ပံပညာများ (Applied Sport Science ) ပါဝင်သည်။ ကရာတေးကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာများတွင် စွမ်းအား(Power) ၊စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်လည်ပတ်ရွေ့လျားသည့်အရှိန် (Centripetal Acceleration) ၊ မျဉ်းဖြောင့်လှုပ်ရှားမှုအရှိန်(Linear acceleration) ၊ နည်းပရိယာယ်(Tactics)၊ အား (နယူတန် ၏ ရွေ့လျားမှု ဆိုင်ရာ ဒုတိယနိယာမ Force = Mass x Acceleration) ၊ စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်လည်ပတ်ရွေ့လျားသည့်အား (centrifugal force) ၊ ဂရက်ဗီတေးယှင်း ကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲအား(Gravitation) ၊ မိုမင်တမ် (ခေါ်) အဟုန်(Momentum) ၊ မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း ရွေ့လျားသည့်လှုပ်ရှားမှု(Linear motion) ၊ စက်ဝိုင်း ပုံသဏ္ဌာန်ရွေ့လျားသည့် ရွေ့ရှားမှု(Circular motion)၊ တော်ဆို ရိုတေးယှင်းနယ် ဖို့စ် (ခေါ်) တင်ပဆုံ ခြေသလုံး ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ခါး နှင့် အထက်က ရင်ခေါင်းပိုင်း လက်မောင်း လက်ဖျံ ပေါင်းစပ်လည်ပတ်ရွေ့လျားသည့် အား (Torso rotational force) ၊ အင်နားရှား(Inertia) ၊ အလုပ်ပြီးခြင်း (Workdone) ၊ အလျင် အမြန်နှုန်း(Velocity)၊ ပါဝါ(power) နှင့်လှုပ်ရှားမှု(Movement) ...စသည့် သိပ္ပံနည်းကျကျ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အချက်များပါဝင်သည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအပေါ်မှ စမ်းသပ်ခံနိုင်သော ကိုယ်ခံပညာသိပ္ပံ ပညာတွင် အခြေခံသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအား(physical power) ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအား(spiritual power) ဆိုင်ရာ သီအိုရီ နှင့် လက်တွေ့ကျင့်စဉ် ဟူ၍ပါဝင်သည်။
၁၉၄၂ ခုနစ် နောက်ပိုင်းကာလတွင် ဂျပန် ကရာတေး ပညာရပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်း ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ဆရာကြီး ဦးကျော်ညွန့်၊ ဆရာကြီး ဦးရစ်ချတ်၊ ဆရာကြီး ဦးစိုးတင့်၊ ဆရာကြီး ဦးသောင်းဒင်၊ ဗိုလ်ကြီးမိုးဟိန်း (ဗထူး)၊ ဆရာ ဦးမောင်မောင်သန်း၊ ဆရာ ဦးမြင့်ကြည်၊ ဆရာ ဦးစံနီ၊ ဆရာ ဦးဝင်းနိုင်၊ ဆရာ ဦးတင်ဝင်းအောင် (ခေါ်) ဆရာ ဦးဖိုးသာအောင်၊ ဆရာ ဦးစိုးဝင်း (မြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးဒို အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး)၊ ဆရာ ဦးအောင်တင်စိန်၊ ဆရာ ဦးဂေးလ်မို စိုးမင်း၊ ဆရာ ဦးမောင်မောင်ဦး၊ ဆရာ ဦးနေဝင်း၊ ဆရာ ဦးမင်းလွင်၊ ဆရာ ဦးစိုးဝင်း(ဟိုက်ကာရီ )…..စသော ဆရာများသည် ထင်ရှားခဲ့သည်။
ဂျူဒို အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ ကရာတေးကိုလည်း အဖွဲ့ချုပ် အဖြစ် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စာရေးသူ က နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ စာဖြင့် စတင်ရေးသားအကြံပြုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးဒိုအဖွဲ့ ချုပ် အောင်မြင်စွာ မဖွဲ့ စည်းမှီ ၁၉၈၁ခုနှစ် ကာလကတည်းကပင် မြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးဒိုအဖွဲ့ ချုပ် ဖွဲ့ စည်းနိုင်ရေးအတွက် အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနသို့ စာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၈.၆.၁၉၈၁ ကြေးမုံသတင်းစာ မှ တစ်ဆင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးသို့ လည်းကောင်း၊ စာရေးသူ က ဓာတ်ပုံနှင့် တကွ ရေးသားတင်ပြအကြံပြုခဲ့ပါသည်။ ဤကရာတေး ဆောင်းပါး သည် မြန်မာ့ကရာတေးလောက အတွက် Myanmar Karatedo Federation
အတွက် သမိုင်းဝင်ကရာတေး ဆောင်းပါး Document တစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။”
၁၉၇၈ ခုနှစ် ကာလကတည်းကပင် စာရေးသူ သည် ကရာတေး အသင်းများ ကျောင်းများ တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည်။ စမ်းချောင်း မြို့ နယ် တွင်လည်းကောင်း၊ အထက(၂) ဒဂုံ မြို့ မ ကျောင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ခြံအမှတ်-၇၄ စီ အင်လျားလမ်း၊ ကမာရွတ် မြို့ နယ် တွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် University of Foreign Languages, Yangon ၏ နောက်ဘက်ရှိ ဦးဘဘကြီး အင်းလျားလမ်း ခြံတွင်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) University of Medicine 1, Yangon လိပ်ခုံးခန်းမ တွင်လည်းကောင်း၊ ခြံအမှတ်-၃၀ F အင်းယားလမ်း ကမာရွတ် မြို့ နယ် တွင်လည်းကောင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ လူငယ်များအား ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည်။
Ethics of Karate + အသိပညာ + လက်တွေ့ကျင့်စဉ် ကို မည်သို့ အမှန်ဆုံး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား အောင် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးမည်နည်း....!
Real ကရာတေးပညာကို မည်သို့ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားအောင်ကြံဆောင် မည်နည်း….! မည်သို့ Handover , the process of transferring လုပ်ဆောင်ပေးမည်နည်း....! စသည့် အချက်များသည် ကရာတေးပညာရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ကရာတေးဆရာများ အလေးထားစဉ်းစားရမည့် Basic Philosophy facts အချက်များဖြစ်သည်။
ဆရာတော် ဗောဓိဓမ္မ (Father of Zen Buddhism ) သည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ပျံ့ပွားရေးအတွက် (520 AD) တွင် တရုတ်ပြည်ရှောင်လင်ဘုရားကျောင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော အိန္ဒိယလူမျိုး တရားပြ ဆရာတော်ဖြစ်သည်။ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့တွင် ကမ္ဘာတွင် နာမည်ကျော်ကြား လူသိအများဆုံးဆရာတော် ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည် ရှောင်လင် ဘုရားကျောင်း သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရှောင်လင် ကိုယ်ခံပညာ နှင့် ချန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို စံနစ်တကျ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။
ဂျပန်ပြည်တွင် ဆရာတော်ဗောဓိဓမ္မ ကို (達磨 Daruma) ၊ ဇင်(ဈာန်) ဗုဒ္ဓဘာသာ( 禅 Zen Buddhism) နှင့် ကိုယ်ခံပညာတို့၏ ရှေ့ဆောင် ဦးစီး ဦးကိုင် စတင်သူ အဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။
မိမိအနေဖြင့်အချိန်မဆိုင်းပဲ ချက်ချင်း လက်ချည်းသက်သက်("လက်နက်မဲ့ Unarmed Combat ") ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်း " ......ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျပန် ကရာတေး Founder ဟုခေါ်ကြသော ဆရာကြီး ဖူနာ့ကိုရှိ ဂီချင်း 船越 義珍 (၁၈၆၈-၁၉၅၇) သည် modern karate ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ သမိုင်းတွင်ပထမဆုံး ဆရာကြီး ဖြစ်သည်။
ကရာ (Kara) ၏ ဗလာ ကို ငါ-အတ္တဝါဒစိတ် (Ego/selfish) မရှိခြင်း/ ဗလာဖြစ်ခြင်း ၊ အမုန်းတရား (Hatred) နှင့် မကောင်းမှုစိတ် စသောစိတ်အညစ်အကြေး မရှိခြင်း/ ဗလာဖြစ်ခြင်း၊ လောဘစိတ် (グリード、欲望 Greed / Desire)၊ ဒေါသစိတ် (怒り Anger )၊ မောဟစိတ် (無知、妄想 Ignorance/Delusion) စသောစိတ်အညစ်အကြေး မရှိခြင်း/ ဗလာဖြစ်ခြင်း၊ မာနခက်ထန် ယုတ်မာမှုမရှိခြင်း/ ဗလာဖြစ်ခြင်း... ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဟိန္ဒူဘာသာ စသော အခြားသော ဘာသာအယူဝါဒများ၊ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်(God) တည်ရှိမှုကို အယုံအကြည် မရှိသူ ဘာသာမဲ့ (free-thinkers/ Atheists/Anti-theist/no religion person) များကပင် ဂေါတမဗုဒ္ဓ ကို တနည်းမဟုတ် တနည်းဖြင့် ကြည်ညို လေးစားကြသည်။
ဗုဒ္ဓခေတ်ပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် နည်းစနစ်သည် သမိုင်းကြောင်းကိုလိုက်ပြီး ပြည်သူများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်၊ ပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်အရ ခံယူကျင့်သုံးလိုက်နာခဲ့ကြ သည့် ပညာရေးဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်ကိုယ်ကျင့်တရား(moral ethics of Buddhism) နှင့် စံ(quality standards) များရှိသည်။ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားချမှတ် ခဲ့သော မေတ္တာဝါဒ+မှန်ကန်သောယုံကြည်မှု+မှန်ကန်သောအသိတရား+မှန်ကန်သောတွေးခေါ်မြော်မြင်+အမှန်တရား(real truth) +မှန်ကန်သောကျင့်စဉ်တို့သည် မှန်ကန်သောငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒ အဖြစ်အကျော်ကြားဆုံး လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုင်းရှိုင်းသူသည် ကာယဒုစရိုက်၊ ဝစီဒုစရိုက်၊ အကြံအစည်ဒုစရိုက်တို့မှ လွတ်ကင်းစင်ကြယ် ကြည်ညိုဖွယ်ရှိသော ကာယကံအမှု သမ္မာကမ္မန္တ အလုပ် မျိုးကိုသာ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သီလနှင့် သမာဓိ မဂ္ဂင် ပြည့်စုံလျှင် ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ ပညာ ကိစ္စလည်း ပြီးစေနိုင်သောကြောင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိ နှင့် သမ္မာသင်္ကပ္ပ မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီး ကိုလည်း စီးနေကြသူများပင် ဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်ပြည်သည် ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်တွင် လူဦးရေ (သန်းပေါင်း ၁၀၀ဝ) ကျော်အထိ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထေရဝါဒ၊ မဟာယာန၊ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားပြန့်ပွားခဲ့သည်။ ထေရဝါဒ ဂိုဏ်းသည် သီဟိုဠ် မှတဆင့် မြန်မာ၊လာအို၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ သီ​ရိ​လင်္က࿿ာ​နိုင်ငံ စသော ဒေသများသို့ ပြန့်ပွားသွားခြင်းဖြစ်၍ တောင်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။ နီပေါနိုင်ငံ တွင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားသည်။
အေဒီ ၅၀ဝ-အေဒီ ၆၀ဝ တွင် ဆရာတော် ဗောဓိဓမ္မ သည် တရုတ်ပြည်တွင် ချန် ဗုဒ္ဓဘာသာ(禅 Chan Buddhism) ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာသည် တရုတ်ပြည်မှာမြစ်ဖျားခံပြီး ဂျပန် မှာ ထွန်းကားပါသည်။ ယဉ်ကျေးမူ အမွေအနှစ် တွေကိုလည်း အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမူအမွေ အဖြစ် တန်ဖိုးထားပြီး ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မူတွေကိုလုပ်ကြပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ သည် တရုတ်နိုင်ငံ ကနေ ဂျပန် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြု ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ကတဆင့် ရောက်ရှိသည်။
ဇင် (ဈာန်) ဗုဒ္ဓဘာသာ တွင် ဝိပဿနာလမ်းစဉ် မရှိ။ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် သမထ လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် အခြေခံသည်။
ဂျပန်ပြည် ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ သည် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ( ဈာန်) သမထ လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ ရှောင်လင် ကွန်ဖူး ကိုယ်ခံပညာ သည် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ( ဈာန်) သမထ လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် အခြေခံသည်။
တရုတ်ပြည်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းတိုက်ပေါင်း (၁၃၀ဝ၀) ရှိ သည်။ အရှင်ဗောဓိဓမ္မ တရုတ် ပြည် သို့ ကြွ၍ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ( ဈာန်) ဂိုဏ်း ကို တည်ထောင်သည်။ ကိုရီးယားပြည် သို့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ရောက်ရှိသည် ။
ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ (Zen Buddhism) နှင့် ကိုယ်ခံပညာတို့၏ရှေ့ဆောင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ တရုတ်ပြည်မှ လာသော မဟာယာန ချန်( 禪 ) ဗုဒ္ဓဘာသာ သုညတ တရား အယူအဆများပေါ်တွင် မူတည်၍ ဂျပန်တို့သည် ဇင် (禪) ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ပြောင်းလဲလာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထိုးထွင်းသိမြင်စွမ်းသော"ဗောဓိဉာဏ်" (Satori) အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
ဇင် (禪) (ဈာန်) ကျင့်စဉ် အနှစ်ချုပ် "ဆာတိုရီ" Satori (悟ိံ) သည် အလွယ်နှင့်ရနိုင်သော တရားမျိုးမဟုတ်။ (Satori and kenshō are commonly translated as enlightenment,aword that is also used to translate bodhi, wisdom and buddhahood.) အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ်တရားရှုမှတ်ခြင်း ကျင့်ကြံ အားထုတ် စီးဖြန်းရ၏။
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဘုရား သည် လူ့သမိုင်းတွင်ဩဇာအကြီးမားဆုံးသော အမြင့်မြတ်ဆုံးသော၊ အမှန်ဆုံး ထိပ်ဆုံးအဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာမည်အကျော်ကြားဆုံး လူသိအများဆုံး(most popular religion) ငြိမ်းချမ်းမှု အရှိဆုံး (most peaceful religion) ဘာသာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘာသာဖြစ်သည။်
ထေရဝါဒ နှင့် မဟာယာန နှစ်ဖက်လုံးက သကျမုနိ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာကို အမြင့်မြတ်ဆုံးသောမြတ်စွာဘုရား အဖြစ်လက်ခံကြသည်။ သစ္စာ လေးပါး တရားတော်ကို နှစ်ဖက်လုံးက အပြည့်အဝလက်ခံကြသည်။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး လမ်းစဉ်သည် နှစ်ဖက်လုံး၏ တရားဖြစ်သည်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာတော်သည် နှစ်ဖက်လုံးတွင် အတူတူပဲဖြစ်သည်။
အနိစ္စ ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ နှင့် သီလ၊သမာဓိ ၊ပညာတွေကို နှစ်ဖက်လုံးက လက်ခံကြတဲ့ အတွက် ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ အဓိက တရားအနှစ်တွေသည် မကွဲပြားဘူးလို့ ဆိုရပါမည်။ အနတ္တ ကို နှစ်ဖက်လုံးတွင်လက်ခံပါသည်။ မဟာယနသည် အတ္တဝါဒ မဟုတ်ပါ။
ထေရဝါဒ က ဘုရားလောင်း ကို ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးလို့ မကိုးကွယ်ကြပါ။
တချို့က ဆိုပြန်သည်။ ထေရဝါဒဆိုတာ ရဟန္တာ ဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုဖို့ ကျင့်တဲ့ ဝါဒဖြစ်ပြီး ၊ မဟာယာနကတော့ ဗုဒ္ဓဖြစ်မယ့် ဘုရားလောင်း ဗောဓိသတ္တ ကျင့်စဉ် ကို လက်ခံတဲ့ ဝါဒ လို့ ဆိုကြပြန်သည်။
မဟာယာန ယုံကြည်မှုသည် ရှေးယခင် အဂါမ (Agama ) ပြဌာန်းချက်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည့် မဟာယာနသုတ် အသစ်များဖြင့် ဖွင့်ဆိုထားပါ သည်။ ယင်းသုတ် အသစ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အခြေခံယူဆချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ရွှေ့ဟြေင်းထားသည့် သုတ်တခုဖြစ်ပါသည်။
(The Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra (Sanskrit; traditional Chinese: 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經; pinyin: Shèngmán Shīzihǒu Yīchéng Dàfāngbiàn Fāngguǎng Jīng; Japanese: 勝鬘経 Shōman-kyō) is one of the main early Mahāyāna Buddhist texts.)
မဟာယာန ကျမ်းများတွင် နိဗ္ဗာန်ကို သုခချမ်းသာတို့ဖြင့် ပြည့်စုံသည့် ဘုံဗိမာန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သံသရာကိုယ်၌ကပင် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း ကွဲပြားသော အယူအဆများ၊သဘောတရားများကို တင်ပြထားသည်။
မဟာယာနအဆိုအမိန့်၏ အခြေခံကျသောမူများသည် အရာအားလုံးအတွက် ဒုက္ခမှ အလုံးစုံလွတ်မြောက်ရေး ဖြစ်နိုင်စွမ်းအားနှင့် ဗုဒ္ဓ၏တည်ရှိနေမှုနှင့် ဗောဓိသတ္တများ၊ ဗုဒ္ဓသဘာဝ (佛性) ကို ပုံဖော်ပေးသည့် အပေါ်တွင် အခြေခံထားပါသည်။
အချို့သောမဟာယာန ကျောင်းတော် များသည် ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုဖော်ပြချက်ကို လွယ်ကူစွာ ရှင်းလင်းဖော်ပြရာတွင် ဗုဒ္ဓ အမိတဗ Amitabha ၏ နာမတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခြင်း၊ ဗုဒ္ဓ အမိတဗ ထံသို့ဂါထာမန္တာန်များရွတ်ခြင်းဖြင့် ဘာသာယုံကြည်မှုနှင့် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှု တို့ကို ရရှိစေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှုဘဝပုံစံ သည် သန့်ရှင်းသော မြေကျောင်းတော် Pure Land Buddhism ၏ ပြင်းထန်သော အာရုံစူးစိုက်ထားမှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး မဟာယာနဘာသာအရှေ့အာရှတစ်လွှားတွင် အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းတွင် ကြီးမားစွာပါဝင်ခဲ့သည်။
သို့သော် ထေရဝါဒတွင်မူ ဆရာစဉ်ဆက် နှင့် ကျမ်းဂန်များတွင် နိဗ္ဗာန်သည် တည်နေရာဘုံ အဖြစ် မယူဆ၊ မသတ်မှတ်သင့်ကြောင်း၊ သံသရာ နှင့် ဆက်စပ်မှုကင်းမှ သာလျှင် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် တိကျစွာရှင်းလင်းပြဆိုထားပေသည်။
သုညတ ဝါဒ (or) Sunyata (or) emptiness အကြောင်း ၁
သုညတ ဝါဒ (or) Sunyata (or) emptiness အကြောင်း၂
Doctrine of Lord Buddha
တရုတ်ပြည် ကိုယ်ခံပညာ နှင့် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာအစ-ဆရာတော် ဗောဓိဓမ္မ
ဂျပန်ပြည် ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ နှင့် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော် ဗောဓိဓမ္မ
ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ နာမည်ကျော်သော ပုံပြင် တစ်ပုဒ်